TZXDuino: Otu Arduino Board na Kaseti maka ZX Spectrum Software | Akụrụngwa n'efu
Gịnị na-bụ Arduino?
TZXDuino: bọọdụ Arduino na cassette maka sọftụwia ZX
E nwere ọtụtụ ochie kọmputa n'anya ọrụ. Ezigbo ndị nchịkọta ndị jikwaa ịzụta ma ọ bụ weghachite akụrụngwa ochie. Omiiko banyere ibe Zilog Z80, Apple Classic, ma obu ihe omuma ndi ozo di n’oge gara aga, dika ZX Spectrum, ma obu Amstrad, Atari, Commodore, na otutu ndi ozo. Ha niile kwesiri ima banyere oru TZXDuino nke anyi gha ekwu banyere ya n’isiokwu a.
N'ebe ndị ọzọ anyị egosila isiokwu iji weghachite egwuregwu vidio ochie ma mee ka ha banye ndị emulators. Oge a anyị ga-ekwu maka ihe nke ahụ bụ NZP, kedu ihe o mere na ụdịdị dị iche iche na Arduino, wdg.
1 ZX ụdịdị dị iche iche
2 Gịnị bụ TZXDuino?
2.1 Iji mepụta onwe gị TZXDuino ị ga-achọ
ZX ụdịdị dị iche iche
Firmlọ ọrụ Britain Nnyocha Sinclair kere otu n'ime kọmputa ndị kasị nwee akụkọ ifo na nke ahụ bụ ihe ịtụnanya maka ndị hụrụ retro n'anya. Ọ bụ ZX ụdịdị dị iche iche nke ga-aga ahịa na Eprel 23, 1982.
Kọmputa 8-bit dabere na microprocessors a ma ama Zilog Z80A. Na mgbakwunye, ọ ga - abụ otu n'ime ụlọ microcomputers ụlọ kachasị ewu ewu na Europe n'oge a.
Otu kachasị na ezigbo kọmpat akụrụngwa maka oge ga-atọ ya ụtọ kọmputa na vidiyo egwuregwu fan nke afọ iri a, na nke ka bụ ihe ngosi nka taa. N'ezie, ndị na-adịghị kechioma nwere mbụ ngwaike, na-afọ ojuju na clones ma ọ bụ emulators na-revivere ha software.
Nke ZX ụdịdị dị iche iche a ga-enwe ọtụtụ nsụgharị, na mgbakwunye na ụfọdụ clones na nkwekọrịta na pụta pụta ihe ịga nke ọma nke ngwaahịa a nke e nwere ọtụtụ dakọtara sistemụ.
Ma akụrụngwa mbụ, àgwà ndị ahụ dị ezigbo mkpa n'oge ahụ:
CPU: Zilog Z80A na 3.5 Mhz na 8-bit maka bọs data ya na 16-bit maka bọs adreesị, na-enwe ike ijikwa ebe nchekwa ndị ọzọ.
Nchekwa- nwere ike ịhọrọ n'etiti abụọ nhazi RAM. Adị 16 kB dị ọnụ ala na ụdị 48 kB dị oke ọnụ. A ga-agbakwunye ya na 16 kB nke ROM nke ọ gụnyere dị ka isi. Na ROM gụnyere BASIC ntụgharị okwu.
Igwefoonu: roba jikọtara na kọmputa na ụfọdụ nsụgharị.
Nchekwa: Magnetik cassette teepu otu ihe ahụ eji ya na usoro ihe eji eme ihe. Enwere ike ịnweta data na ọsọ nke 1500 bit / s na nkezi. Ya mere, ihe egwuregwu vidio banyere 48 kB were ihe dị ka 4 min. Ọ bụ ezie na egwuregwu ụfọdụ jiri ọnọdụ turbo mee ka ọsọ ọsọ. Na mgbakwunye, otu afọ mgbe mwepụtara nke ụdịdị dị iche iche, Sinclair wepụtara ZX Interface I, nke nwere ike ijikọ 8 draịva ngwa ngwa akpọrọ microdrives nwere ọsọ nke 120.000 bit / s.
Ihe eserese: usoro ihe osise ya nwere ike ijikwa matriks ruo 256 × 192 px. Ọ bụ ezie na mkpebi agba ahụ bụ naanị 32 × 24, nwere ụyọkọ pixel 8 × 8 na ozi agba ma ọ bụ àgwà ndị dị ka ụcha ndabere, ụcha ink, nchapụta na ọkụ.
N'ezie, ọtụtụ ihe nile ịgbakwunye na kọmputa a. Ọbụghị naanị ZX Microdrive, kamakwa ihu diski ndị ọzọ dịka Beta Disk, DISCiPLE, OPUS Discovery, styluses, ụmụ oke (Kempston Mouse, Star Mouse, AMX Mouse,…), ndị na-ebi akwụkwọ, ndị na-ahụ maka egwuregwu vidiyo dị ka ọystụ, wdg.
Na 1986, Sinclair Research rere Amstrad akara ya na ngwaahịa ya, otu n'ime akụkọ ihe mere eme. Mana, ọ bụrụ na ị maghị, Sinclair Research Ltd. ka dị ka ụlọ ọrụ taa ...
Na ihe a niile maka nrọ nke onye ọhụụ aha ya Ọ bụ Sir Clive Sinclair, onye London na-echepụta ihe, injinia na onye ọchụnta ego nwere echiche a magburu onwe ya iji ree microcomputers maka ụlọ. Ihe kachasị mma bụ na ị nwere ike ịga n'ihu na-anụ ụtọ ha na ọrụ dịka TZXDuino nke m na-egosi gị n'okpuru ...
Gịnị bụ TZXDuino?
Ọ bụ eziokwu na ị nwere emulators n'aka gị, yana ịzụta ma ọ bụ weghachite ngwa ọrụ mbụ nke ị hụrụ na ahịa nke aka gị. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwe ngwaike iji nwee ike ịgba ọsọ egwuregwu vidio na sọftụwia dị ka ọ dị na mbụ. Ma obughi onye obula nwere ike inweta otu, ma obu ebe a NZP na-ewe na ya mkpa.
Ọ dị mma, cheedị ogige dị ka teepu cassette, ya na ụlọ mmepe yana nwee ike iji rụọ ọrụ nke izizi ZX Spectrum nke ị debere na kaadị microSD. Nke ahụ bụ isi ihe ị ga - enweta dị ka TZXDuino. Ọ na-enweghị mbụ ngwaike, ma ihe bụ ihe ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị emulators ...
Ndị na-ahụ maka ọrụ a bụ Andrew Beer na Dunan Edwards, nke nwere echi na iche echiche jisiri ike tinye ihe niile n'ime teepu casset. Yabụ ịnwere ike ịnwe n'aka gị obere ngwaọrụ iji kpọlite ​​ndị niile akụkọ ifo na 80s ka 90s maka ụdịdị dị iche iche.
Y’oburu na iju ajuju banyere etu esi kee ya, nke bu eziokwu bu na ha adila dabere na arduino. N'ihi ya aha ya. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ otu ma nwee mkpụrụ obi nke onye mepụtara, ị nwere ike mepụta cassette nke gị. Na njikọ a ị ga-ahụ PDF nke nwere ntuziaka niile maka mgbakọ nke ihe eletrọniki. Na eziokwu bụ na ọ bụghị ihe dị mgbagwoju anya na ogologo usoro ...
Naanị ihe dị mgbagwoju anya ọ nwere bụ na ọ chọrọ ụfọdụ amamịghe iji jikọta ihe niile dị n'ime yana ị nwere ezigbo mma tin soldering nkà.
Kedu ụzọ ọ bụla, ejiri m ị na-amụta ọtụtụ ihe n'oge usoro ahụ ewu na ntụrụndụ ozugbo ezukọ ga-ekwe nkwa ...
Iji mepụta onwe gị TZXDuino ị ga-achọ
Ị nwere ike zụrụ ihe niile mfe na ụlọ ahịa pụrụ iche ma ọ bụ na Amazon, dị ka:
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
MicroSD kaadị modul
Ike Potteriom B103
Ihe na-agbanwe agbanwe
PAM8403 2X3W Kọmitii Amụlị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » TZXDuino: bọọdụ Arduino na cassette maka sọftụwia ZX
Igwe eletriki: ihe niile ịchọrọ ịma
ASUS Tinker Board: ihe niile ịchọrọ ịma
Nweta ihe ọhụrụ na akụrụngwa.